Indawo yokuhlala yesitayela saseScandinavia kufutshane nesikhululo sikametro saseGovorovo - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yesitayela saseScandinavia kufutshane nesikhululo sikametro saseGovorovo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguМарина
Indlu eqaqambileyo netofotofo nayo yonke into oyifunayo, ekwindawo yokuhlala yaseTatianin Park. 8-10 imizuzu ukuhamba ukusuka kwisikhululo sikametro saseGovorovo. Kwintsimi ye-complex kukho iivenkile zokutya, i-cafe "Zerna" (ikofu, i-croissant 😇), i-salon yobuhle. Ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseVnukovo ngeteksi imizuzu eyi-17. Kukho imivalo ethe tye eyadini yabalandeli bezemidlalo.
Indawo entle, ecocekileyo enayo yonke ifanitshala eyimfuneko kunye nezixhobo zombane. Ilungele iindwendwe ezi-1-3. Ungalungisa okanye ukufudumeze ukutya kwikhitshi lakho. Kuhlala kukho iti, ikofu, isidudu, ipasta kunye nebhotolo. Ukuhlamba izitya, i-toaster, umatshini wokuhlamba, i-Wi-Fi yasimahla, yonke into yokuthuthuzela
Indawo ezolileyo kwaye ezolileyo kumazantsi-ntshona eMoscow, kunye nokufikeleleka okuhle kakhulu kwezothutho. Ngaphakathi komgama ohambahambayo kukho amachibi, ipaki enkulu yehlathi enendawo "Meshchersky Les". Ivenkile enkulu "Lenta".
Ndiya kuvuya ukuphendula imibuzo enxulumene nendawo yokuhlala
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moscow